The 27-inch iMac na Obere-LED ihuenyo na-abanye n'ime mmepụta | esi m na mac
Tony Cortes | | Asịrị
O doro anya na nke ugbu a 27-anụ ọhịa iMac nke Apple na-ere nwere ụbọchị ya gụchara. Ọ bụ bastion ikpeazụ nke Intel na katalọgụ Mac nke Apple na-enye ugbu a, yana ezi uche dị na ya ga-eji ụdị Apple Silicon ọhụrụ dochie ya n'oge na-adịghị anya.
Asịrị ọhụrụ na-egosi na mwepụta a ga-adị obere oge. Ekwuputala na ọtụtụ ndị na-ebunye ngwa iMac ọhụrụ ebidola ịnye akụkụ ha arụpụtara maka mgbakọ ikpeazụ. Mmepụta na-aga n'ihu.
DigiTimes ka zipụrụ a akụkọ ebe ọ na-akọwa na ọtụtụ ndị na-ere ihe akụrụngwa Apple amalitelarị zipu ngwaahịa emechara gị na osisi mgbakọ ka ha nwee ike ikpokọta iMac ọhụrụ 27-inch na M1 processors.
N'ime akụkọ a, a kọwara na mbupu amalitelarị n'ụdị dị nta, nke ihe ndị dị mkpa iji chịkọta ọhụrụ. 27-anụ ọhịa iMac, maka mkpokọta mkpokọta ya kwekọrọ. Ihe ịrịba ama doro anya na a ga-ahapụ ya na obere oge.
Dịcha, kwuru na ọhụrụ 27-anụ ọhịa iMac ga-oru na mmiri nke 2022. Dị ka asịrị na e pụtara, ọ ga-n'ịnyịnya a ihuenyo na. Obere-LED panel, nke ga-enwe oke ume ọhụrụ nke 120 Hz.
Na imewe yiri iMac 24-inch
Ebe dị iche iche na-atụkwa aro na ọ ga-enwe ọdịdị mpụga yiri nke iMac ọhụrụ 24-inch. O yikarịrị, ị na-ebulikwa processors M1 Pro na M1 Max Kedu ka ha si eme na MacBook Pros inch 14 na 16.
Ọ bụ ezie na n'onwe m, ekwenyere m na ndị na-emepụta ihe ndị dị otú ahụ na-eme ka ọ rụọ ọrụ na arụmọrụ dị oke elu, dị mkpa na akwụkwọ ndetu nke batrị na-arụ ọrụ, na ebe obere oriri dị mkpa. Na iMac ọ dịghị mkpa ka processor na-adị otú ahụ "oru oma", na ọzọ ụdị M1 nwere ike chepụta ebe nhazi ike na-enwe n'elu arụmọrụ. Anyị ga-ahụ ma Apple ọ tụrụ anyị n'anya, ma ọ bụ chekwaa ya maka ọdịnihu iMac Pro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Asịrị » 27-inch iMac na Obere-LED ngosi na-abanye na mmepụta
DuckDuckGo na-ezube ịmalite ihe nchọgharị kwụ ọtọ maka Mac